विश्व मार्चको सामग्रीहरूको सही लेखनको लागि मार्गदर्शक
घर » विश्व मार्चको सामग्रीहरूको सही लेखनको लागि मार्गदर्शक
1 प्रेस विज्ञप्तिका लागि लेख गाइड, समाचार, प्रेस विज्ञप्ति
1.1 पाठ ढाँचा
1.2 सामग्री लेखनको लागि कुञ्जी शब्द
1.2.1 खोजशब्द सामान्यतया खोजीहरू भएमा कसरी जान्नुहुन्छ?
1.3 शीर्षकहरू र शीर्षकहरू
1.4 अन्य वेबसाइटहरूमा लिङ्कहरू
1.6 Youtube भिडियो
1.7 अन्तिम नोटहरू
प्रेस विज्ञप्तिका लागि लेख गाइड, समाचार, प्रेस विज्ञप्ति
पाठमा कम्तीमा न्यूनतम सम्भव ढाँचा हुनुपर्छ, जुन यो डिजाइन डिजाइन तत्वहरूको स्तरमा सरल हुनुपर्छ। त्यो हो, फरक पाठ आकार प्रयोग नगर्नुहोस्। पूर्वनिर्धारित पाठ साइज प्रयोग गर्नुहोस्।
सही कुरा भनेको पाठ मात्र भालू हो:
बोल्ड: महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरूलाई हाइलाइट गर्न
कर्सिभ: अन्य भाषामा नियुक्ति वा शब्दहरूको लागि न्यूनतम आवश्यक।
सूचीहरू: तिनीहरू संख्यात्मक वा अङ्कित हुन सक्छन्। 1 पछि अंक वा अंकहरूको साथ सरल सूचीहरू।
जोगिनका लागि: रेखांकन, पाठ रंग, आदि ...
यदि पाठ शब्द वा Google डक्समा लेखिएको छ भने, यो वेबमा अपलोड गर्नु अघि यसलाई HTML ढाँचामा बदल्न आवश्यक छ। यसको लागि तपाईंले यो उपकरणलाई प्रयोग गर्नु पर्छ: https://word2cleanhtml.com। यसले सबै पाठलाई शब्द वा Google डक्समा राख्दछ, र HTML मा पाठ फर्काउँछ। त्यसपछि त्यो एचटीएमएल पाठ वर्डप्रेस एचटीएमएल सम्पादक ट्याबमा टाँसिएको छ:
सामग्री लेखनको लागि कुञ्जी शब्द
यो सम्भावना गाइड को सबै भन्दा जटिल छ सामग्री लेखनयसैले म केहि प्रस्ताव गर्न जाँदैछु जुन सबैभन्दा आधारभूत हो र यो सकेसम्म राम्रो गर्न सकिन्छ। कुञ्जी शब्द2र5शब्दहरू बीचको सेट हो जुन धेरै उल्लेखनीय छ र लेखमा धेरै दोहोर्याइएको छ। उदाहरण: यदि लेखले "ला कोरुआमा मानव चेतना"त्यसो5शब्दहरूको यो सेट पुरा तरिकाले आलेखको कीवर्डको लागि उम्मेदवार हुन सक्दछ। वास्तवमा यो उदाहरणमा केवल "मानव श्रृंखला" पर्याप्त हुन सक्छ। सामान्यतया, आदर्श भनेको कुञ्जी शब्द भनेको त्यस्तो चीज हो जुन मानिसहरूले गुगलमा खोज्छन्।
खोजशब्द सामान्यतया खोजीहरू भएमा कसरी जान्नुहुन्छ?
शब्द ट्रयाकर उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्: https://www.wordtracker.com/search (स्पेन मा क्षेत्र मा राख्नु पर्छ) जबसम्म यसको परिणामहरू छन्, अर्थात्, 10 खोजहरू, यो पर्याप्त छ। न त अति तुच्छ शब्द प्रयोग गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि: "शान्ति"। यदि तपाइँ अब Wordtracker प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न किनभने तपाइँले खोज सीमा नाघेको छ, तपाइँ पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ Übersuggest.
आदर्श यो हो कि यसको नतिजा छ, तर खराब नतिजा, 10 र 500 को बीचमा आदर्श हुनेछ। उदाहरण को लागी: "विश्व मार्च" पर्याप्त छ, अत्यधिक राम्रो छैन किनभने यसमा केवल 10 छ, तर पर्याप्त:
अर्कोतर्फ, "शान्ति", "प्रेम", ... धेरै खराब छन् किनभने तिनीहरूको संख्या धेरै छ, राम्रोसँग 500 माथि:
मलाई जागरूक छ कि कहिलेकाहीँ यी मापदण्डसँग मेल खान्छ भन्ने शब्द फेला पार्न गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईं फेला परेका छन् कि एक फेला परेन, केहि पनि हुँदैन.
लक्ष्य यो कीवर्ड राख्नु हो कम्तिमा2पटक पाठमा बिना शीर्षक शीर्षकहरू, वा अन्य बिन्दुहरू जुन म तल टिप्पणी गर्नेछु। यस कीवर्ड को दोहराव मध्ये एक, बोल्ड हुनु पर्छ.
शीर्षकहरू र शीर्षकहरू
मुख्य शीर्षक (जुन माथिको बक्समा देखा पर्दछ) सँग 50 र 75 वर्णहरू हुनुपर्छ। र तपाईले कीवर्ड समावेश गर्नु पर्छ। यसैले यो सामान्यतया एक राम्रो विचार हो कि कुञ्जी खोज्न खोजशब्द चयन गर्न
यो आवश्यक छ कि पाठमा धेरै शीर्षकहरू छन्, कम्तीमा एक2स्तरको शीर्षक (शब्दमा2शीर्षक)। आदर्श रूपमा, तपाइँसँग 1 वा धेरै2स्तर र3तह धारकहरू हुनुपर्दछ।
साथै यो सिफारिस गरिएको छ मुख्य शीर्षकको तलको खण्डमा एउटा उपशीर्षक राख्नुहोस् "यहाँ उपशीर्षक प्रविष्ट गर्नुहोस्"।
उपशीर्षकको आकार ठूलो हुन सक्छ, आदर्श रूपमा यो 121 र 156 वर्णहरू छन्, किनभने यो मेटा विवरण प्रयोग गर्न जाँदैछ। साथै, खोजशब्द पनि समावेश गर्नु पर्छ.
अन्त्यमा, यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि होल्डर3(H3) सँग माथिको H2 हुनुपर्दछ र कम्तिमा १ होल्डर H1 हुनुपर्दछ जहिले पनि पदानुक्रम दिन्छ। H2> H2> H3।
तसर्थ, यदि हामी होल्डरहरूको क्रममा हेर्छौं यदि उदाहरणका लागि हामीसँग यी तीन आदेशहरू छन्
H2 - H3 - H4 - H2 - H4: यो गलत हुनेछ किनभने H4 सँधै H3 द्वारा अघि हुनुपर्दछ
H3 - H2: यो गलत हुनेछ, किनकि H3 सँधै H2 द्वारा अघि हुनुपर्दछ
H3 - H3 - H3: यो खराब हुनेछ किनभने त्यहाँ कम्तिमा एक H2 हुनुपर्दछ
H2 - H3 - H4 - H4 - H2 - H3 - H2 - H3। यो राम्रो हुनेछ किनकि पदानुक्रम क्रम सम्मान गरिएको छ।
अन्तमा, किवर्ड जान पर्छ, सामग्री शीर्षकको 1 मा (यो कुनै फरक छैन यदि यो शीर्षक2वा शीर्षक3मा छ)।
अन्य वेबसाइटहरूमा लिङ्कहरू
2 प्रति पाठ बाहेक बाहिर जाने लिंकहरूको प्रयोग नगर्नुहोस् máximo, हुनत राम्रो 1 मात्र।
जबसम्म धेरै प्रतिष्ठाको साथ एक पृष्ठमा बाह्य लिङ्क हो ** , विकिपीडिया प्रकार, एक शक्तिशाली अखबार वा केहि जस्तै कि, लिङ्क मा राख्नुहोस् NOFOLLOW विकल्पहरूमा:
यो महत्त्वपूर्ण छ कि केहि बिन्दुमा प्रत्येक लेख लिंक वेबको अन्य बिन्दुमा। यदि यो उत्पन्न हुन्छ जहाँ, मुख्य पृष्ठमा लिंक गर्न तपाई सधैँ रिसोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणका लागि: "अन्तिममा विश्व मार्च, हामी उपस्थित हुन सक्षम भयौं ..."
आन्तरिक लिङ्कमा, NOFOLLOW नगर्नुहोस्।
** यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने तपाईंसँग धेरै प्रतिष्ठा छ वा प्रविष्ट गर्नुहुन्न भने प्रविष्ट गर्नुहोस् https://www.alexa.com/siteinfo र डोमेनको URL राख्नुहोस्, उदाहरण «hoy.es»।
यदि तिमी हो 100.000 तल ग्लोबल रैंकमा, त्यसपछि तपाईंलाई NOFOLLOW राख्नु आवश्यक छैन। तर यदि यो हो माथि, हो तपाईलाई राख्नु पर्दछ.
छवि अपलोड गर्नु अघि यी कारकहरूलाई ध्यान राख्नुहोस्:
छविको नाम सरल हुनुपर्छ, बिना "ñ" (n लाई n मा परिवर्तन गर्नुहोस्), उच्चारण बिना, र यदि खाली ठाउँहरू छन् भने, तिनीहरूलाई हाइफनहरूमा परिवर्तन गर्नुहोस्।
छवि सम्मिलित गर्दा, तपाईंले शीर्षक, वैकल्पिक पाठ र विवरण फिल्डहरू भर्नु पर्छ। तपाईं तीन भागहरूमा त्यहि राख्न सक्नुहुन्छ।
कुनै छविले 1000 px चौडाईमा पार गर्नु हुँदैन।
साथै यो एक विशेष छवि राख्नु आवश्यक छ। यदि तपाईंले पाठमा एउटा छवि राख्नुभयो भने, छविको रूपमा चित्रित छविको रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्। यो उत्तम छ कि पाठमा कुनै छवि छैन, त्यहाँ कुनै उल्लेखनीय छवि छैन। शीर्षकमा, वैकल्पिक पाठ र विशेष छविको विवरण, यो खोजशब्द आवश्यक राख्नु आवश्यक छ.
विशेष छविको लागि आदर्श आकार हो 960 एक्स 540 या 16 को एक पहलू अनुपात: 9। छविको चौडाइ 600px र 1200px को चौडाइमा हुनुपर्दछ।
यस छोटोको प्रयोग गर्नुहोस्:
बस एउटा URL द्वारा, एकै परिवर्तन गरेर।
एक रोचक तथ्यको रूपमा, यस लेखले सामग्रीको लेखको लागि सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ जुन मैले यहाँ टिप्पणी गरेको छ कि खोजको मापदण्ड सहित:
यहाँ म तयार छु एक डाउनलोड पीडीएफ चेकलिस्ट सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरूसँग कुनै पनि बिर्सनु हुँदैन।